Manni marichaa qorattoota digrii qabaniin guutuuf kan hojjetu ta'uu ibse
Qorattoota qorannoofi qo'annoo qonnaa digrii lammaffaafi sadaffaa qaban horachuuf kan hojjetu ta'uu Manni Marii Qorannoo Qonnaa ibse.
Waltaasisaa Sekretaariyaatii Qorannoo Qonnaa Mana Marichaa Obbo Makuriyaa Taaddasaa, yaa'ii idilee 2fa mana marichaa Wiixata galma mana marichaatti geggeeffamerratti, kaayyoon manni marichaa hundaa'eef, sirna qorannnoofi qo'annoo deggaruu, waltaasisuufi qajeelchuudha jedhaniiru. Qajeelfamoota ba'aniin sirni qorannoo qonnaa biyyattii wayita sakatta'amanitti ulaagalee qorataan qonnaa guutuu qabuurratti hanqinni akka mul'atu himaniiru. Akkaatuma kanan ulaagaalee qorataan guutuu qabu keessaa tokko sadarkaa barnootaa akka ta'e ibsaniiru.
Biyyattiin qorattoota qorannoo qonnaa digirii sadaffaa qaban %8-10, digirii lammaffaa %35, digirii jalqabaa %60 ta'uu eeraniiru. “Biyyoota guddatanitti namoonni digirii jalqabaa qaban akka qorataatti hinlakkaa'aman” kan jedhan Obbo Makuriyaan, qorattoota digirii sadaffaa qaban %60tti, digirii lammaffaa %40tti guddisuuf kan hojjetan ta'uu himaniiru.
Obbo Makuriyaan dabalataanis, bu'uuraalee misoomaa qorannoofi qo'annoo ammayyeessuun omishaaleen biyyattii gabaa addunyaarratti dorgomaa akka ta'an kan hojjetan ta'uu eeraniiru.
Torban kana/This_Week 33789
Guyyaa mara/All_Days 1625584